सलहबाट सतर्क रहौँ- विचार - कान्तिपुर समाचार
सलहबाट सतर्क रहौँ
असार १५, २०७७ सम्पादकीय
भारत र पाकिस्तानका कतिपय क्षेत्रमा बालीनाली नष्ट गरेको सलह शनिबार नेपाल पनि प्रवेश गरेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतबाट पर्सा, बारा, सर्लाही र रूपन्देहीमा गरेर चारवटा झुन्ड प्रवेश गरेका हुन् ।
तीमध्येबाट केही कीरा उछिट्टिएर र हावाले उडाएर पाल्पा, सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रे र काठमाडौं पनि आइपुगेका छन् । सामान्यतया यो कीरा ४ देखि ८ करोडको समूहमा हिँड्ने भए पनि नेपाल प्रवेश गरेको संख्या यकिन भइसकेको छैन । यसले उड्दै जाँदा हजारौं मानिसलाई पुग्ने खानाबराबरको खाद्यबाली सखाप पार्ने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपाल सलहका लागि उपयुक्त भूगोल होइन । त्यसमाथि, सोमबारदेखि मनसुन थप सक्रिय हुँदा वायुको वेगसँगै सलह पनि पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाने भएकाले धेरै चिन्ता गर्नु नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । तर यसो भन्दैमा ढुक्क भइहाल्न मिल्दैन । अहिले नै पनि सरकारी अधिकारी र कतिपय विज्ञहरूको अनुमानविपरीत सलह नेपाल भित्रिएको हो । संयोगवश यतिबेला धान रोप्ने समय भएकाले तराईका धेरै खेत खाली छन् । कतिपय क्षेत्रमा भएका मकैबारी र तरकारी बारीमा ती अडिएका छन् । कतै रोप्न ठीक पारिएका धानको बीउसमेत सलहले खान थालेपछि किसान पिरोलिएका छन् । तसर्थ, कीरा देखिएको क्षेत्रमा बाली जोगाउन आवश्यक प्रतिकार्य गर्न जरुरी छ ।
कुनै तरिकाले कपडाले ढाकेर कीरालाई जाल हानी धानको बीउलाई जोगाउन सकिन्छ । सलह भारत प्रवेश गरेसँगै नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुखको अध्यक्षतामा कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू सम्मिलित उक्त समितिले रोकथाम तथा नियन्त्रणको खासै कुनै तयारी गरेन । विगतमा जेजस्तो आकलन गरिएको भए पनि सलह नेपाल पसिसकेकाले कहीँ–कतै बढी नै क्षति पुर्‍याउँछ कि भनेर प्रतिकार्यका लागि जुटिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वमै चुनौती बनेको यो समस्याले साँच्चै सतायो भने समाधान त्यति सजिलो छैन । अन्यत्रजस्तो हेलिकप्टरबाटै कीटनाशक औषधि छर्कने हैसियत मुलुकको छैन ।
अहिले प्रदेश ५ ले सलह संकलन गर्नेलाई वडा कार्यालयमार्फत प्रतिकेजी २० रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ, यस्तै विधि अपनाएका अरू देशका उदाहरण हेर्दा यो त्यति प्रभावकारी उपाय होइन । यसबाट किसानले क्षतिको तुलनामा नगन्य मात्रै लाभ लिन सक्छन् । त्यसैले, थोरै संख्याका सलहलाई किसानले टिन, ड्रम, थाल ठटाएर भगाउन सक्छन् । धूवाँ वा गुइँठा बालेर पनि बाली जोगाउन सक्छन् । बालीमा धेरै समय बसेर खाइरहेमा ठूला कपडालाई जालका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
अहिले नै ठूलो क्षति पुर्‍याइनसकेको भए पनि आउने क्रम जारी रहेमा बाली जोगाउन मुस्किल पर्न सक्छ । सरकारले नै कीराले पुर्‍याउन सक्ने क्षति आकलन गरेर त्यहीअनुसार तुरुन्त बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।
नागरिकलाई त्यहीअनुसार तयार बनाउनुपर्छ । सलहविरुद्ध जुध्न हाँस, माकुरा र छेपाराजस्ता प्राकृतिक सिकारी प्रयोग गर्न सकिने भए पनि यो विधि सजिलो छैन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेका सलहको हकमा विषादी प्रयोगको अर्थ हुँदैन । तैपनि, ठूलो समूह एकै ठाउँमा भेटिएमा कीटनाशक औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सरकारले विषादी व्यवस्थापन, वितरण, छर्कने मेसिन र जनशक्तिजस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । यसो गर्दा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर सावधानी अपनाउनुपर्छ । तत्काल टिपेर खान मिल्ने तरकारी आदिमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।
सलहजस्ता कीरा बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन कारक रहेको विज्ञहरूको मत छ । यसकारण, यस्ता समस्याहरूसित जुध्न विश्व समुदायमाझ हामीले सदैव पैरवी गर्नुपर्ने ठूलो मुद्दा जलवायु परिवर्तन हो । अहिलेलाई भने यसका कारण उत्पन्न परिस्थिति अर्थात् सलहसित जुध्नुको विकल्प छैन । सकेसम्म कम क्षति बेहोर्ने गरी यो कीरा नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्छ । धेरै बाली भएका क्षेत्रतिर स्थानीय स्तरमा कार्यदल नै बनाएर सामूहिक प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा समुदाय र सरकारी दुवै स्तरको पहल आवश्यक छ । सम्बन्धित पालिकाहरूले किसानलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : असार १५, २०७७ ०८:३५
संक्रमणको चपेटामा ‘फ्रन्टलाइनर’
कर्णालीमा प्रदेशस्तरीय कोरोना विशेष अस्पतालका ‘फोकल पर्सन’ समेत अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गरी हालसम्म १ सय ६ जना संक्रमित भएका छन् ।
असार १५, २०७७ कलेन्द्र सेजुवाल
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश अस्पतालले जेठ पहिलो साता २ सय बेड क्षमताको ‘कोरोना विशेष अस्पताल’ सञ्चालन गरेसँगै त्यसको ‘फोकल पर्सन’ को जिम्मा एक जना वरिष्ठ फिजिसियनलाई दियो । ती चिकित्सकले संक्रमितको उपचार र निगरानी गर्नुका साथै समन्वयको काम पनि गरे ।
बिहीबार कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनी अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् । ‘जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा कतिबेला कहाँबाट सर्‍यो पत्तै भएन,’ उनले भने, ‘कोरोनाको संक्रमण दर तीव्र छ, तर केही दिनमा निको हुने विश्वासमा छु ।’
उनीसँगै प्रदेश अस्पतालका अर्का एक चिकित्सक पनि संक्रमित भएका छन् । ती चिकित्सक विशेष अस्पतालमा समेत खटिएका थिए । अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काका अनुसार प्रदेश अस्पतालमा मात्र संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ९ पुगेको छ । ‘उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएपछि ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गरेर उनीहरुको सम्पर्कमा पुगेका अन्य सहकर्मीको पनि स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अस्पतालको उपचार पद्धतिमा पनि सावधानी अपनाएका छौं ।’
प्रदेश अस्पतालमा मात्र होइन, कर्णालीका अन्य जिल्लामा समेत कोरोना प्रतिकार्यका लागि अग्रपंक्ति (फ्रन्टलाइन) मा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि संक्रमणको चपेटामा परेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म प्रदेशभर १ हजार ४ सय २८ जना व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संख्या १ सय ६ जना रहेको छ । सुरक्षाकर्मी ६५ जना, स्वास्थ्यकर्मी २३, कर्मचारी १५ र जनप्रतिनिधि ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा महाशाखाको भनाइ छ । ‘संक्रमितको उपचार र क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापनका क्रममा उचित सावधानी नपुग्दा ‘फ्रन्टलाइन’ मा रहेर काम गर्नेहरु संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्,’ महाशाखाका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलले भने, ‘यसका लागि सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’
संक्रमण भए पनि परीक्षण नगरी बसेका विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या बोकेर अस्पताल पुगेका बिरामीबाट चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना सरेको अनुमान अस्पतालको छ । अस्पताल निर्देशक डा. खड्काका अनुसार सर्पले टोकेर र विष सेवन गरेर अस्पताल आइपुगेका दुई जना बिरामीलाई उपचार गरिसकेपछि मात्र कोरोना पुष्टि भएको थियो । ‘कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने बेलामा बाहेक अरू समयमा सामान्यत: पीपीई लगाइँदैन,’ उनले भने, ‘उपचारका लागि आएका बिरामी वा उनका आफन्तले पनि कोरोनाबारे संकेत नगर्दा समस्या हुने गरेको छ ।’ जेठ अन्तिममा सर्पले टोकेर ल्याइएका बिरामी बराह तालको क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका भए पनि सोबारे आफन्तले जानकारी नदिएका उनले बताए ।
बुधबार जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) मा कार्यरत ६ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भयो । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेका अनुसार प्रसूति वार्डमा आएकी सिंजाकी एक महिलामार्फत संक्रमण सरेको अनुमान गरिएको छ । ‘प्रसूति गराउन आएकी महिलामाथि कोरोना भएको शंका गर्ने कुरा भएन, सरासर सेवा प्रवाह गरियो,’ उनले भने, ‘तर ती महिलामा पछि संक्रमण भएको पाइयो, हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीमा तिनै महिलाबाट सर्‍यो कि भन्ने शंका छ ।’
पीपीई प्रयोग नगर्दा संक्रमण
कर्णालीका अस्पतालहरुमा अहिले स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) को अभाव छैन । संक्रमितको अधिक चाप भएकामध्ये प्रदेश अस्पतालमा १ सय सेट, जुम्ला अस्पतालमा ७ सय सेट र दैलेख अस्पतालमा करिब ५ सय सेट पीपीई मौज्दात छ ।
तर, पीपीई सेटको प्रयोग संक्रमितको उपचार गर्नुपरेमा मात्रै हुन्छ । दैलेख स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. निरञ्जन पन्तले कतिपय सुई लगाउनुपर्ने बिरामीसमेत रहेकाले पीपीई प्रयोग गर्नुपरेको बताए । ‘लक्षण नदेखिएका अन्य संक्रमितको निगरानी वा उपचार गर्नुपर्दा भने पीपीई लगाइँदैन,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा आउने अन्य रोगका बिरामीको उपचार गर्दासमेत पीपीई प्रयोग गरिँदैन ।’
अन्य उपचारमा पीपीई प्रयोग र उच्च सावधानी नअपनाइँदा नै उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमण फैलिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र व्यवस्थापनमा दौडधुप गरिरहने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले त पीपीई प्रयोग गर्नेबारे सोचेकै हुँदैनन् । उनीहरु सामान्य मास्कको भरमा अग्रपंक्तिमा रहेर काममा खटिने गर्छन् । संक्रमित सुरक्षाकर्मीमध्ये दैलेखका ३३ जना, जुम्लाका २७ जना, सुर्खेतका ४ जना र जाजरकोटका १ जना रहेका छन् । ‘मान्छेहरु नजिक आउँछन्, कुरा गर्न खोज्छन्, हामीसँग मास्कबाहेक अरू छैन,’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा रहेको क्वारेन्टाइनमा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले भने, ‘हाम्रो बर्दीले रोक्ने कुरा भएन, कोरोना भइहाले पनि सहुँला भनेर ड्युटी गर्नुपरेको छ ।’
सुर्खेतमा परीक्षण रोकियो
सुर्खेतस्थित आरटी–पीसीआर मेसिनमा खराबी आएपछि शुक्रबारदेखि परीक्षण रोकिएको छ । यसले गर्दा सुर्खेतमा संकलन भएका स्वाबका नमुना तापक्रम मिलाएर फ्रिजमा थन्काइएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका प्रयोगशाला संयोजक ओम आचार्यले नेपालगन्जबाट प्राविधिकलाई बोलाएर देखाउँदा पनि समस्या समाधान नभएको बताए । ‘अब काठमाडौंबाट इन्जिनियर आएर हेरेपछि बल्ल समस्या समाधान हुन्छ कि ?,’ उनले भने, ‘त्यहाँसम्म त परीक्षण हुने सम्भावना छैन ।’
दैलेखमा भने सोमबारदेखि पीसीआर परीक्षण सुरु हुने भएको छ । नारायण नगरपालिकाले बुधबार मेसिन जडान गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय प्रमुख डा. पन्तले परीक्षणका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिए । दैलेखको मेसिन प्रयोगमा आएपछि सुर्खेतका स्वाबसमेत दैलेख पठाउने निर्देशनालयले जनाएको छ । शनिबारदेखि केही स्वाबका नमुना परीक्षणका लागि नेपालगन्जसमेत पठाइएको छ ।
कर्णालीमा आइतबारसम्म २८ हजार १८ नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । तीमध्ये जुम्लाबाट १४ हजार ५ सय ७८ र सुर्खेतबाट १३ हजार ४ सय ४० नमुनाको परीक्षण भएको छ । परीक्षण भएकोमध्ये १ हजार ४ सय २८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेशका विभिन्न आइसोलेसनबाट ९ सय ५६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । संक्रमितमध्ये ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
प्रकाशित : असार १५, २०७७ ०८:२७